Iyunithi Yokwelashwa Komthombo Womoya, Ukulawula, Izingxenye Eziphezulu - I-Blch Pneumatic
Inhlanganisela ye-U series FR.L
Susa amanzi nezinhlayiya ngempumelelo. Isici sesihlungi se-40µm nesi-5µm siyashintshana kalula futhi singashintshwa. Esinembile futhi kulula ingcindezi setting. Amafutha e-Lubricator angagcwaliswa ngaphandle kokumisa ukunikezwa komoya. Isifutho samafutha enkungwini siqinisekisa ukuthambisa okuhle kwemishini. Isitsha se-anti-acid ne-alkali nesitsha se-aluminium sinikela ngokuvikelwa okuhle kakhulu ezindaweni zokusebenza kwamakhemikhali. Uwoyela weLubricator (Kunconyiwe): ISO-VG32
F uchungechunge FR.L inhlanganisela
Umfutho osebenzayo omkhulu: 16bar, ingcindezi enkulu yokuphuma: ibha engu-12 Ingagcwalisa uwoyela ku-lubricator njengoba uhlelo oluzenzakalelayo luqhubeka lusebenza. Ukusebenza kokulungiswa kwengcindezi kunokwethenjelwa ngokunemba okuphezulu. Ukusebenza kahle kokuqeda umswakama nokusanhlamvu okuqinile kuphezulu.
Inhlanganisela ye-AFC-BFC FR.L
AC-BC uchungechunge FRL inhlanganisela
Isihlungi somoya se-AFR-BFR
C uchungechunge Lubricator Womoya
I-AR / BR series Air Regulator
HSV uchungechunge isilayidi Valve
I-ASC Series Flow Control Valve
I-RE Series Flow Control Valve
3H-4H uchungechunge Isandla isigwedlo Valve
FV320-420 uchungechunge Foot Amaphayiphu
CXSM20-50 Double Rod eyisilinda
SC50-150 Standard eyisilinda
P80, CU uchungechunge Mahhala Mount uMbhalo
Metal eyodwa touch nokufakwa
Ividiyo ayibonakali, kungenzeka ukuthi isiphequluli sakho asiyisekeli ividiyo ye-HTML5
# UMBHALOLINK #
SIYAKUTHOKOZELA! I "Yangaphakathi Pilot Umhlahlandlela we-Precision Pressure Ukunciphisa Valve" ejwayelekile okwakuholela phambili kubhalwe yinkampani yethu yamukelwe yi-Zhejiang Product Quality Association njenge-R ...
IBLCH Pneumatic Science and Technology Co Ltd yasungulwa ngo-Agasti 2004, itholakala endaweni yezimboni yokuthuthukiswa komnotho i-YUEQING. Le nkampani ihlanganisa indawo engama-24000